၁၉၉၄ခုနှစ်များကာလဆီက ကျနော့်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံလေးတခုကို ကဗျာတပုဒ်အဖြစ် ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။
တွေကိုအမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ တချို့လူတွေအတွက်စာ
မဖွဲ့လောက်ပေမယ့် ကျနော်တို့ဘဝမှာ ဒီလောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး ပင်ပန်းတဲ့ခရီးမျိုးတခါမျှ မသွားခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် အခုလိုကဗျာတပုဒ်အဖြစ်ဖန်တီးမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးကိုအတူတူသွားခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်တချို့က ရန်သူစစ်အုပ်စုနဲ့တိုက်ရင်းကျဆုံးခဲ့ကြရသလို တချို့ကတော့ယနေ့တိုင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိနေကြပါသေးတယ်။ တချို့ကတော့တတိယနိူင်ငံအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြပြီးနှစ်အတော်ကြာပြတ်တောက်ခဲ့ကြရတဲ့ပညာရေးဘက်ကိုပြန်ပြီးခြေဦးလှည့်နေကြရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာကျနော်လည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မလိမ်မညာတမ်းဝန်ခံရရင် ကျနော်တို့လို ရှေ့တန်းမှာအကြာကြီးနေပြီး ရန်သူစစ်အုပ်စုနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေဟာ ပညာကိုလိုလိုလားလားနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာငတ်ခဲ့ကြရတာပါ.
အတိတ် ကာလနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ဘယ်တော့မှမေ့မရနိူင်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်သာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ တယောက်တနေရာစီဝေးကွာရင်း နယ်မြေသစ်ကိုယ်စီမှာရုန်းကန်နေကြရပေ
မယ့် မမေ့နိူင်တဲ့အတိတ်ကိုယ်စီကိုဖြင့် သံယောဇဉ်လွန်းတင်ဖွဲ့ရင်း …
ငါတို့ရဲ့ ၉၄ ရွှေပြည်တော်ညများ….
ဒီပို့စ်လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့၁၀လလောက်ကကျနော့်ဘလော့ခ်ပေါ်မှာတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မဖတ်ရသေးတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 8:40 AM
တောလမ်းခရီးကြမ်းကို မျက်စိထဲ မြင်လာတယ် ကိုဆောင်း.. အခုအထိ မရောက်နိုင်သေးဘူးနော်။
ပြန်ဖတ်ခွင့် ရတာ ကျေးဇူး ကိုဆောင်း။
ပထမတစ်ခါတင်တုံးကလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ ဘ၀ထဲက ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ.. ကြိုက်တယ်ဗျာ။
ကိုယ်ကိုတိုင်မကြံဖူးပေမယ့် ခံစားလို့ ရတယ်ဗျာ။
ခြေလှမ်းနှေးရင် သွေးစုတ်တဲ့ ကျွတ်ကောင်တွေ
မိုးရာသီအတွက် ဆန် အလေးအချိန် ကီလို ၂၀မျှကို ကျောဘိုးပြီး စမ်းချောင်းပေါ်မှာ ပြေးလွားခဲ့တာတွေ
ရှေ့တန်းပြန်ဆင်းတုန်းက ကိုစီုးဝေ (ဗကပ) စခန်းကို ကိုဆောင်းနှင့် ကျွန်နော် တနေ့ချင်း ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ကျန်တဲ့လူတွေ တောင်ပေါ်မှာ စခန်းချတာတွေ၊ လမ်းမကြွမ်းလို့ ၀ါးဖေါင်လုပ်ပြီး စီးမျောခဲ့ရာမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ရေတံခွန်ကြီးတွေအပေါ် ဖောင်ထိုးခဲ့တာတွေ
အထူးသဖြင့် ရွှေပြည်တော်ရဲ့  ကျောက်စစ်ရေအေးအေးနှင့် ဆင်းရဲသား ဖီလင်များဖြင့် ခံစားခဲ့တာတွေက တရေးနိုး လာမေးရင်တော့ ဤသည်မရွေး ပြန်ပြောပြနိုင်လောက်အောင် မမေ့နိုင်တဲ့ အရာတွေပေါ့ဗျာ၊
မျှော်လေတိုင်းဝေး ရွှေပြည်တော် ကို လွမ်းဆွတ် တမ်းတသွားသည်။